G mail နှစ်ခုဖွင့်ကြည့်ရအောင် .. ~ လုလင်တစ်ဦး၏အတွေးဆုံမှတ်
G mail နှစ်ခုဖွင့်ကြည့်ရအောင် ..
ကိုယ့်ဆီမှာ က G mail က နှစ်ခု ရှိတယ် .. ဒါပေမယ့် mail ကိုဝင်တော့ကျတော့ တစ်ခုကိုဝင်လိုက် ပြီးနောက်တစ်ခုကိုဝင်မယ်ဆိုတော့လည်း ၀င်ထားတဲ့ဟာကို ထွက်လိုက် .. ဆိုးပြီ .. အဲလိုမျိုး အခက်အခဲလေးတွေ ကို အဆင်ပြေအောင်လုပ်လို့ရပါတယ် .. အခု add-ons ကလေးကိုသာ firefox မှာ install လုပ်ပေးထားလိုက် .. ကေတယ်ဗျာ ..ကဲဒါဆိုရင် အရင်ဆုံး add-ons ကလေးကိုထည့်လိုက်ဗျာ ...
ထည့်ပြီးသွား ရင် firefox ကို restart ချလိုက်ပေါ့ .. ချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ .firefox=>tool=> add-on ကိုနှိပ်လိုက်ရင်စောစောက သွင်းလိုက်တဲ gmail manager ကိုတွေ့ရပါ့မယ် .. အဲဒီကနေပြီးတော့ option ကိုရွေးလိုက်ပါ .
Browser ရဲ့ status bar မှာလည်း Gmail manager icon လေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ် ..
‘All account settings ကိုသွားလိုက် ပြီးရင် တော့ ကိုယ့် ရဲ့ account ကလေးတွေကိုဖြည့်လိုက်ပါ.. password တော့ မှန်အောင်ဖြည့်နော် ..computer ဖွင့်တိုင်း မှာ စပြီးတော့ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ start up ကိုရွေးပေးလိုက် .
တက်တာနဲ့သူဘာသာသူ လေး net ချိတ်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဗျာ ...ဖယ်ထုတ်ချင်ရင်လည်းဖယ်ထုတ်လို့ရပါတယ် ..ကိုယ်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ tab ကလေးတွေ ဖွင့်ပြီးတော့ account တစ်ခုချင်းစီကို ဖွင့်လိုက်ပေါ့ ..စမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ပေါ့ .. အောက်မှာ ပုံကလေးတွေ ပြထားပါတယ် ..အဆင်ပြေပါစေ...
Categories: Add-ons , G mail
Posted on Thursday, August 06, 2009 by မောင်လုလင်
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခု လိုလေးလာဖတ်သွားတဲ့အတွက် ..
aung zaw said...
thanks you so much,brother.I already tested it.Everything is smoothly running.Very very good!
~~ Yangon Time ~~
Zawgyi font for 64 bit
............Visit To Money...........
ဒီနေရာကို တချက်နှိပ်ပြီး ကူညီပေးပါ
Add-ons ( 13 )
Antivirus ( 17 )
Audio Editions ( 1 )
Bat ( 10 )
Converter (7)
Downloader ( 19 )
E book -Com ( 12 )
Firefox ( 14 )
G mail ( 12 )
G talk ( 13 )
IE (5)
Knowledge ( 41 )
Pc error ( 28 )
Phone App (2)
Portable software ( 18 )
Registry ( 18 )
Screen saver (3)
Tips ( 14 )
Website ( 29 )
Window ( 47 )
Copyright © လုလင်တစ်ဦး၏အတွေးဆုံမှတ် | Powered by Blogger